သိထားသင့်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် သိပ္ပံနည်းပညာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သိထားသင့်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် သိပ္ပံနည်းပညာ…
သိထားသင့်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် သိပ္ပံနည်းပညာ…
Posted by ကို ထွဋ် on Jun 20, 2014 in Buddhism, Facebook, Literature/Books, Other - Non Channelized, Science & Religion, Sciences & Resources | 18 comments
ဂေါတမဘုရားရှင်ရဲ့ အသံတော်ကိုရှာတွေ့ ပြီ
ဘုရားရှင်တကယ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ ရဲ့အသံတော်ဟာ လေထဲမှာပဲ ရှိလိမ့်ဦးမယ်ဆိုပြီး ရှာဖွေကြတာ အခု ဟိမဝန္တာတောကြီးရဲ့ အနီးတဝိုက်မှာ ရှာလို့ တွေ့ ပြီ
ဘုရားရှင်ရဲ့စွယ်တော်ကို စစ်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ဝန်းကျင်ခန့် ကလို့ဥရောပသိပ္ပံ ပညာရှင်တွေက အတည်ပြုပေးကြတယ်
DNA က သာမန်လူတရောက်ရဲ့ DNA မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပြီး ဘုရားရှင်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကို လက်ခံခဲ့ကြတယ်
ငရဲကိုရှာကြတာ အခု ရုရှားနိုင်ငံ ဆိုက်ဘေးရီးယားတောနက်ကြီးရဲ့ အောက်မှာ တွေ့ ပြီ
ဒေါက်တာအဂ္ဂါမစ်ချယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက နတ်ကိုရှာတာ အခုတွေ့ ပြီ နတ်သားတစ်ပါးကပေ ၃၀ ဝန်းကျင်ခန့် ရှိတယ်လို့ကွန်ပျူကအဖြေထုတ်ပေးတယ်
အမေရိကန်နဲ့ ရုရှားကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ တစ္ဆေသရဲတွေကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိကြောင်း အလျင် ၅၀၀၀ နှုန်းရှိသောကင်မရာဖြင့်ရိုက်လျှင်တွေ့ ရှိကြောင်း တစ္ဆေသရဲများ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် အက်တိုပလာဇာမ် ခေါ်သော
အလွန်နူးညံ့သည့်ဒြပ်နှင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ဖရီကွမ်စီ(frequency)နှစ်သောင်းကျော်အသံလွန် လှိုင်းဒဏ်ဖြင့်သုတ်သင်လျင် ၎င်း တို့ ၏ခန္ဓာကိုယ်ပြိုကွဲပြီး အသံ အလင်း နှင့် တုတ်
ဓားလက်နက်များကိုကြောက်ပြီး အမဲသား နှမ် မုန့်ညက် ဆီနှင့် အသားမျိုးစုံကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြကြောင်း အစရှိတဲ့သရဲနှင့်ပတ်သတ်သောအကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ပြီး ဘုရားရှင်ဟောထားခဲ့သော
တစ္ဆေ သရဲ များမှာ တကယ်ရှိကြောင်းအတည်ပြုပေးခဲ့ကြတယ်
လူတွေမှာရောင်ခြည်ရှိကြောင်းကို ဓာတ်ပုံဖြင့်ဖေါ်ပြပေးပြီး ဂေါတမဘုရားရှင်မှာရောင်ခြည်တော်ခြောက်သွယ်ကွန်မြူးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဂျာမဏီနိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်ဗွန်ရိုက်ခင်းဘတ်ကအဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်
ဘုရားရှင်တကယ်ရှိခဲ့ရင် သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေရင် သိနိုင်လောက်တယ်ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ် ကျောက်စာဝန် မစ္စတာ ကန်နင်ဂန်ကအိန္ဒိယ အစိုးရကို အကူအညီတောင်းပြီးရှာတာ
ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံပြီး ဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်နေပါတယ်လို့ အော်ဟစ်နေကြတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က မိတ်ဆွေတွေကော ဂေါတမဘုရားရှင်အကြောင်းကို
ဘယ်လောက်သိပြီးဘုရားရှင်သာသနာတော်ကြီးကိုဘယ်လိုများ စောင့်ရှောက်နေကြပါသလဲတရားတော်တွေ့ တိုင်း လက်ညိုးလေးတချောင်းသုံးပီး share ဖို့ တောင်သတိမရကြပဲနဲ့ သာသနာတော်ကြီးကို
စောင့်ရှောက်တယ်လို့ ပြောတာကိုဘယ်လိုများယုံရမှာလည်း ဟင်…
Credit: Ashinsar Sana
ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် Science
FB မှာတော့ မနက်စောစောကတည်းက ဖတ်မိပြီးပြီ
ဒီသတင်း. . .
တကယ်တော့ ဒါက ကိုယ့်ပြောပြောတတ်တဲ့ ဂျန်န၀ါရီ နောလစ်ပါ… သတင်းလားဆိုတော့ ကြာပါပီ.. ဒီ အကြောင်းတွေ သိတာ.. ဒါပေမဲ့ မစုမိဘူး.. ဆောင်းပါးလားဆိုတော့ အဲလိုလဲ ခေါ်လို့ရတယ်… မကျေမနပ်တောက်ခတ်သံကတော့ နောက်ကရေးတဲ့ Share ဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့စာကြောင့်ပါ.. တကယ်တော့ သိပြီးသားတွေကို ပြန်လည် စုစည်းပေးထားတဲ့ သဘောပါ.. ကျွန်တော်က တမင်တင်တာ.. ဖတ်ဖြစ်အောင်ရယ်.. ဒီမှာတင်ထားတော့ ကျွန်တော် အချိန်မရွေး ပြန်ရှာဖတ်လို့ ရအောင်ရယ်ကြောင့်ပါ… ပထမက မထည့်ဘူးပဲ.. အောက်က တိုက်တွန်းစာကို ဒါပေမဲ့ Copy ကူးထားတာဆိုတော့ အကုန်ကူးတာပဲ ကောင်းပါတယ်လို့.. ဒါမှ ပြုစုသူကို ကူရရောက်တယ်ဆိုပြီး… အခုလို မန့်တာ ကျေးဇူးပါ..
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဘာသာအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလိုပဲ…..
ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ်ရာကို မြင့်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ မှန်မှန် မမှန်မှန် ပြောနေရေးနေရင် ကိုယ့်ဘာသာကို ထိခိုက်နိုင်တာမို့……….
ကိုယ့်ဘာသာကို မြင့်စေချင်ရင် ကိုယ်တိုင်နှလုံးသားမှာ ဘုရားတည်နိုင်အောင် ကြိုးစားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
အဲလိုရယ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ.. အခု Buddha TV Show စီးရီးလေး ကြည့်မိတော့.. ဒီစာလေးလဲတွဲပီး မြင်တော့ နည်းနည်းပေါ့ဗျာ.. ဘယ်လိုပြောမလဲ.. ပြောတတ်တော့ဘူးဗျ…
အင်းးးးး ၊ သက်သေခံ အထောက်အထား ရှိရင်တော့ ကောင်းမှာဘဲ ။
သက်သေခံ အထောက်အထား မရှိဘဲနှင့် ရေးထားတဲ့စာတွေကြောင့် ၊
ယုံစားလွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အရှက်ကွဲရ ၊
ကမ္ဘာ့အလည်မှာ ငပေါကြီး ဖြစ်ရပေါင်းတွေ ၊ များလှပေါ့ ။
အထင်ရှားဆုံး ဥပမာ ကတော့ ၊
” ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဘာသာအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရွေးချယ်လိုက်တယ် ”
ဆိုတဲ့ ကောဋ္ဌာဟလ ပါဘဲ ။
အရမ်း ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာက ၊
အဲဒီ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဘာသာ ဆိုတဲ့ ကောဋ္ဌာဟလ ကို ၊
ဘယ် ကျေးဇူးရှင်က အပြောင်အပျက် စလုပ်လိုက်သလဲ မသိဘူး ။
နိုင်ငံတကာ အတွေးအမြင်အားနည်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုက ယုံကြသဗျာ ။
ဆိုးတာက ၊ တစ်ချို့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေက တရားပွဲတွေမှာပါ ထည့်ဟောနေသဗျ ။
ဘာသာခြားတွေကတော့ ကွယ်ရာမှာ လှောင်ပြောင်နေတော့မှာဘဲ ။ ဒုက္ခ ၊ ဒုက္ခ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ သိပ္ပံနည်းကျ လုပ်စရာကို မလိုပါဘူး။ ဒါ ဦးနှောက်ကိစ္စ၊ ဥာဏ်ရည်ကိစ္စ၊
အန်တီ တခါက သထုံမှာ ဘုရားရောင်ခြည်လွှတ်တယ်ဆိုပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကို ရှဲလိုက်မိတယ်။
အဲဒါ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် သူငယ်ချင်းက ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တာ တန်ခိုးတွေက အဓိက မဟုတ်၊လက်တွေ့ကျင့်ကြံတဲ့ ၀ိပဿနာ အားထုတ်မှုက အဓိကမလား။နင်လို လူမျိုး(အန်တီ့လို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်ဖြစ်ချင်သူ)တယောက်က ဒါမျိုး မရှဲသင့်ဘူးလို့ ဝေဖန်ခဲ့တယ်။
အားပေးကြလို့.. ကျေးဇူးပါ.. ကျွန်တော်က ဘုရားဟောတရားတွေကို အရမ်းလက်တွေ့ဆန်တဲ့ သိပ္ပံပညာနဲ့ သက်သေပြနိုင်တာကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ သိအောင် တင်တာပါခင်ဗျာ့…
” အရမ်းလက်တွေ့ဆန်တဲ့ သိပ္ပံပညာနဲ့ သက်သေပြနိုင်တာကို
ဗဟုသုတ အနေနဲ့ သိအောင် တင်တာပါခင်ဗျာ့ ”
ဟုတ်လား ၊ ကျနော်က အပျော်လျှောက်ရေးထားတာတွေလို့ ထင်မိနေလို့ ။
OK ပါ ၊ ကျနော့်ကို သက်သေခံ အထောက်အထား တစ်ခုခု ပေးပါ ။
( ဥပမာ နိုင်ငံတကာ သတင်း ဋ္ဌာန တစ်ခုခုက ရေးထားတဲ့ ၊
သတင်း / ဆောင်းပါး ရဲ့ Web Page Address လေး ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ။
ကောဋ္ဌာဟလ Web Page တွေတော့ မပေးပါနဲ့ )
သိပ် များများ မချဲ့ချင်ပါဘူး ။ အပေါ်ဆုံးက စာ နှစ်ကြောင်း နှင့်ဘဲ စ လိုက်ရအောင် ။
၁ ။ ဂေါတမ ဘုရားရှင်ရဲ့ အသံတော်ကို ( ဟိမဝန္တာတောကြီးရဲ့ အနီးတဝိုက်မှာ ) ရှာတွေ့ ပြီ ။
၂ ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ စွယ်တော်ကို စစ်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ဝန်းကျင်ခန့် က ။
( DNA Test ဒါမှ မဟုတ် Carbon Test ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံပါမယ် )
အိုကေပါ.. Foreign Resident ရေ.. ကျွန်တော်က ဖတ်ဖူးခဲ့တယ်.. ဟုတ်တယ်.. အခုထပ်တွေ့တော့ ပို့စ်အနေနဲ့ တင်ပေးမိတယ်.. ကျွန်တော်တို့လို ဘာသာမှ မဟုတ်ဘူး.. တခြားဘာသာတွေမှာလဲ အဲလို သက်သေပြချက်တွေကို စာအုပ်နဲ့ကို တခမ်းတနား ထုတ်တာ မြင်ဖူးတယ်.. အဲတော့ သူတို့က ပြောလာခဲ့ရင် ဒီပို့စ်ဖတ်ဖူးတဲ့ ကလေးတွေပေါ့.. များသောအားဖြင့်ပေါ့.. သူတို့မှာ ပြန်ပြောစရာ စကားနည်းနည်းရှိသွားတာပေါ့.. ပြီးတော့ တခြားဘာသာက စာအုပ်မှာ ဘယ်စာအုပ် ဘယ်ဌာနရယ် ဆိုပီး အညွှန်းမပါဘူးဗျ.. အခုလို ထောက်ပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့.. ကျွန်တေ်ာက တိတိကျကျ မဖြေနိုင်တော့ ခိုင်မာမှု မရှိဘူးလို့ ဖတ်မိတဲ့ ဘာသာခြားက ထင်သွားနိုင်တော့.. ဒါမျိုးကိုတော့ နည်းနည်း ဆင်ခြင်သင့်တယ် ထင်တယ်… Foreign Resident လဲ ဒီပို့စ်က အကြောင်းအရာတချို့ကို နဂိုကြားဖူးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ… အဲတုန်းကရော ဒီလို ဘယ်ဇာစ်မြစ်က ဒီအကြောင်းတွေထွက်လာလဲ ရှာဖူးပါသလား.. ကျွန်တော်က လမ်းမှားပေးတာ မဟုတ်ပါ.. မသိသေးသော မဖတ်ဖူးသေးသော သူများ ဗဟုသုတ အလို့ဌာ တင်ပေးတာပါ.. ဒါပေမဲ့ မမှားလောက်ဘူးဆိုတာတော့ သိတယ်.. စာအုပ်တွေလဲ ရှိပါတယ်.. အကုန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး… အရမ်း အတိအကျ သိချင်ရင်တော့ နဂိုရေးထားတဲ့ ဆရာတော် လင့်ပေးပါ့မယ်.. လျှောက်လိုက်ပေါ့.. https://www.facebook.com/ashinsar.sana.7?fref=photo
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်လဲ ပထမက ရိုးရိုးလေးပဲ မသိသေးတဲ့လူတွေ သိအောင် တင်လိုက်ပေမဲ့.. အခု ကျွန်တော် စာပြန်ရှာဖတ်ပီး.. ထပ်ဖြေပေးပါ့မယ်… လောလောလတ်လတ်တော့ ဆရာတော်ကိုပဲ လျှောက်ကြည့်ပေါ့…
ကို Yae Myae Tha Ninn ရေ ။
” ဒီပို့စ်က အကြောင်းအရာတချို့ကို နဂိုကြားဖူးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ…
အဲတုန်းကရော ဒီလို ဘယ်ဇာစ်မြစ်က ဒီအကြောင်းတွေထွက်လာလဲ ရှာဖူးပါသလား ”
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ ၊ ကျနော် က ဟုတ်မဟုတ် ဇစ်မြစ်ကို လိုက်လေ့ ရှိတယ်ဗျ ။
ဒီပို့စ်က အကြောင်းအရာတချို့ကို ၊ နဂို ကတည်းက ကြားဖူးပြီးသားပါ ။
အတော်များများရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို လိုက်ဖူးပါတယ် ။
အဲဒဟာကြောင့် ၊ ဒီဟာတွေဟာ ကောဋ္ဌာဟလ တွေ မှန်း သိနေတာပါ ။
ဥပမာ ပြောရရင် ၊ ကျနော် လေ့လာထားရသလောက် ၊
ဘုရားရှင်ရဲ့စွယ်တော်ကို နိုင်ငံတကာက စစ်ဆေးချင်တယ်ဗျ ။
ထိမ်းသိမ်းထားတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေ ကိုယ်နှိုက်က အစစ် မခံတာဗျ ။
” ခိုင်မာမှု မရှိဘူးလို့ ဖတ်မိတဲ့ ဘာသာခြားက ထင်သွားနိုင်တော့..
ဒါမျိုးကိုတော့ နည်းနည်း ဆင်ခြင်သင့်တယ် ထင်တယ် ”
မှန်တာပြောရရင် ၊ အလိမ် အညာတွေကို လျှောက်ပြော ဂုဏ်ယူနေပြီး ၊
ဘေးလူ / ဘာသာခြားတွေက လှောင်ပြောင်တာ ကို ခံရတာထက်စာရင် ၊
ဘာမှ မ ပြောဘဲ တိတ်တိတ် နေ နေတာကမှ ပိုကောင်းမယ် ထင်တာဘဲ ။
ကျနော်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာကလည်း ၊
အဲဒီလို မမှန်တာတွေ နှင့် ဂုဏ်တင်တာကို လက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ် ။
ကျနော် ရေးခဲ့တဲ့ Post လေး တစ်ခုမှာ ၊
ဒီလို အကြောင်းတွေ နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ပြောခဲ့ကြသေးတယ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး ။
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၀ ) ( ရုရှ စကား ပြောသင့်တယ် ဆိုပဲ )
” ငရဲတွင်းတွေ့တယ်ဆိုပြီးလည်း.. ဖြန့်ကြသေးတယ်..။
Scientist who dug into hell in Siberia and recorded the cries of the …
Mar 28, 2011 – This hoax states thataborehole in Siberia drilled into Hell and
the voices of the Damned could be heard. The hoax has been circulating …
အဲဒါတွေ အမှန်ထင်ပြီး လက်ခံသူ.. ဆက်ဖြန့်နေသူတွေ ကိုယ်တိုင်က..
ဘာသာရေး အစွန်းရောက်နေတာ.. မသိနိုင်ကြဖြစ်နေတာ.. အံ့စရာ..
ပို့.. ပိုအံ့စရာက.. အဲဒါတွေက.. Hoax တွေပါဆိုတာကို.. ထုတ်မပြောကြတဲ့.. သိနေသူတွေပါ…
အိုအသင်လောက.. နှပ်ချသူနှင့် နှပ်ချခံသူများရှိကြပါတကား.. ”
” အဲဒါတွေက.. Hoax တွေပါဆိုတာကို.. ထုတ်မပြောကြတဲ့.. သိနေသူတွေပါ ”
” ၂ ။ အဲဒါကမှ ၊ ကျနော့် အမြင်မှာ ၊ တကယ့်ကို စိတ်လေစရာ ကိစ္စပါ ”
၁ ။ အဘ ကတော ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အစစ်အမှန် ( အစစ်အမှန် ) ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
၂ ။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ တားမြစ်ထားတဲ့ မုသာဝါဒ ကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ၊
အမှန်တရား ( အမှန်တရား ) ကိုသာ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အတွက် ။
၃ ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကိုလဲ အတုအယောင်တွေ ဖုံးအုပ်သွားမှာ စိုးရိမ်မိတဲ့အတွက် ။
ကိုယ့်ရဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ နှင့်ပါတ်သက်တဲ့ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်တွေ တင်ပြလာရင် ၊
ဒီလိုဘဲ ၊ ဆက်လက် မေးမြန်း ထောက်ပြသွားမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာသာတိုင်း ကိုးကွယ်မှုတိုင်းမှာ သူ့ယုံကြည်ရာ ရှိတတ်စမြဲပါ။ တစ်ချို့လည်း ဘာယုံကြည်မှန်း လက်ခံရမှန်း မသိလေတော့ ဘာသာမဲ့အဖြစ် ကိုယ့်အင် ကိုယ့်အားကို လက်တွေ့ဆန်ဆန် လက်ခံနေတာလဲ ရှိကြပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်အရ ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ဖြစ်တာပါ ကျန်တာတွေတော့ မပြောတတ်ဘူး အဲ မပြောချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။
ဒီမှာကတော့ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ များပါတယ်.. ဘုရားစာအုပ်သီးသန့်ဆို ဖတ်ဖို့ ရာနှုန်းနည်းတယ်.. ဒီလို အစုံသုပ်ကလေး လုပ်ထားတဲ့ဟာဆို စပ်စုကြမိမှာ.. အဲမှာ တလုံးစ နှစ်လုံးစ ၀င်လဲ မနည်းဘူးဆိုပြီး.. ဘက်စုံကနေ လုပ်ပေးမှ ပိုပြီးရင့်သန်ခိုင်မာလာမှာ.. အထူးသဖြင့် တက္ကသိုလ် ရောက်ပီဆို ၀ိဇ္ဇာဘာသာတွဲဆို Philo က Minor ယူတော့ ကိုယ့်ဘာသာကို စိတ်ဝင်စားစ ပြုလာတယ်.. လူငယ်ကလဲ ဖြစ်ပြန်တော့ လက်တွေ့တို့ဘာတို့ ဆိုတော့ ခုတင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လိုပို့စ်ကို စိတ်ဝင်စားမှာပဲ.. ဒါဟာလဲ တနည်း အားဖြင့် လမ်းကြောင်းပေါ်ဆွဲတင်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယူဆတယ်.. ကိုယ်တိုင်လဲ ပြောခဲ့သလို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာကိုး.. အဲစိတ်လေးနဲ့ တင်ပေးတာပါ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ဒီနည်းကတော်တော်မသိသား.. ဆိုးဝါးစွာ သာသနာဖျက်နည်းတမျိုးလို့ယူဆမိတယ်..
” ဒီနည်းကတော်တော်မသိသား.. ဆိုးဝါးစွာ သာသနာဖျက်နည်းတမျိုးလို့ယူဆမိတယ် ”
မှန်ပါတယ် သူကြီးရေ ။
ကျနော် ကတော့ ၊ သာသနာကို ဖျက်တဲ့နည်းလို့တော့ မသုံးရက်ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဒီလို ကောဋ္ဌာဟလ တွေဟာ ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ၊
လူ ကဲ့ရဲ့ ခံရစေပြီး ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ ။
ဟုတ်ပါပြီ.. သူကြီး.. အဘရေ.. ကျွန်တော် မှန်တာပြောရရင် ပြောလဲ ပြောခဲ့ပါတယ်.. Buddha TV Show လက်ရှိ ကြည့်နေပါတယ်.. အဲအချိန်မှာ FB မှာ ဘုရားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတခုကို ထပ်တွေ့တယ်.. အဲတော့ ကျွန်တော်လဲ ဖတ်ဖူးတယ်.. မစုမိဘူး.. တခြားသူတွေလဲ ဖတ်ဖူးတယ်.. မစုမိဘူး.. ထင်ပြီး ပို့စ်တင်လိုက်တာပါ… တခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိသလို.. သေသေချာချာ လုံးစေ့ပတ်စေ့ထိတော့ မလေ့လာထားတာ ၀န်ခံပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ တင်တာ ဘုန်းကြီးတပါးဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့်ဗဟုသုတလေးနဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ တင်လိုက်တာပါ… သူကြီးတို့ ပြောသလို သာသနာဖျက်နည်းတမျိုးဆိုရင်တော့ နည်းနည်းပိုလေ့လာပြီး မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြကြရင် မကောင်းဘူးလား.. အဲခါကျရင် ကျွန်တော်လဲ FB မှာ ပြန်တင်ပြီး ချေပပေးမှာပေါ့… တကယ်သာ ဒါဟာမမှန်ရင် အဲလို ပို့စ်ပြန်တင်တော့ ကုသိုလ်ရကြမှာပေါ့ဗျာ… ကျွန်တော်ကတော့ နဂို ၅မူးပဲ ယူသူဆိုတော့ သူကြီးတို့ ရှာထားပြီးသားကို ပြန်တင်ပြီး ၅မူးပဲ ထပ်ယူပါ့မယ်…
အောက်မှာမနှစ်ကသတင်းလေး ပြန်ရှာတင်ပေးလိုက်တယ်..။ ဆီလီကွန်ဗယ်လီဆိုတာ.. ကမ္ဘာ့နည်းပညာဦးဆောင်နေရာပါ..။ အဲဒီလိုနေရာမှာ အခုလို ဗုဒ္ဓအတွေးအခေါ်တွေ..တရားတွေလက်ခံလာတာထက်ပိုစွမ်းတဲ့.. သာသနာပြုနည်းမရှိပါဘူး..။ အဲဒီသတင်းမျိုးကိုသာရှယ်ကြပါ..။
နောက်တခုက.. နည်းပညာထိပ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကို.. အသံတော်ရှာတွေ့တာတို့.. စွယ်တော်ဆိုပြီး.. နွားရိုးသွားပြတာတို့.. အလုပ်မဖြစ်တဲ့အပြင်..အထင်သေးခံရမှာအသေအချာပါပဲ..။
အထင်သေးခံရမှာ…ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်..။ လက်ခံယုံကြည်တဲ့.. မြန်မာတွေကိုသာ…
In Silicon Valley, Meditation Is No Fad. It Could Make Your …
by Noah Shachtman – in 3,573 Google+ circles
Jun 18, 2013 – Meditation and mindfulness are the new rage in Silicon Valley. … These companies are doing more than simply seizing on Buddhist practices. …. so big, so quickly, is that it stripped away the dogma and religious trappings.
Experts claim Buddha tooth relic actually came from an animal
SINGAPORE — Dental experts have raised doubts over the authenticity ofapurported Buddha’s tooth inaSingapore temple, claiming it could not have come from any human being, The Sunday Times reported.
More than 60,000 donors poured 45 million Singapore dollars (29 million US dollars) and 27 kilograms of gold into the four-storey building where the tooth, said to be one of Buddha’s molars, is kept ina3.6-metre-high stupa made of gold.
“There is absolutely no possibility that it isahuman tooth,” Dr Pamela Craig,asenior lecturer at the University of Melbourne’s school of dental science, was quoted as saying.
After examining photographs, Craig said it probably came fromacow or water buffalo.
Human teeth should be rounded withashort crown andacomparatively longer root, but the picture clearly showsalong crown andashorter root, she noted.